छोरी ग’र्भवती हुने ड’रले अमा निरन्तर ३ महिने सुई लगाइदिन बा’ध्य ! – Purba Aawaj
छोरी ग’र्भवती हुने ड’रले अमा निरन्तर ३ महिने सुई लगाइदिन बा’ध्य !
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: १२:५२:५७
काठमाडौं । रोल्पाकी सरला (नाम परिवर्तन) ले अपांगता भएकी आफ्नी १९ वर्षीया छोरीलाई लामो समययता परिवार नियोजनको अ’स्थायी साधन तीन महिने सुई लगाइदिने गरेकी छन।
द्व’न्द्वका’लमा शा’रीरिक हिं’सासमेत खे’पेकी सरलाका तीनमध्ये एक छोरी मा’नसिक रूपले अ’पांगताको सि’कार भएकी छन्। विपन्न परिवारकी उनी दिनभर म’जदुरी गर्न गएको समयमा उमेर पुगेकी
छोरी ज’थाभावी हि“ड्न थालेपछि सा’वधानी अपनाउँदै उक्त सु’ई रोज्नुपरेको बताउँछिन्। ख’राब नि’यत भएका पुरुषहरूको चं’गुलमा परेकी छोरीको गत साल ग’र्भपतन गराउनुपरेपछि सरलाले छोरीका लागि तीन महिने सुई वि’कल्पका रूपमा रोजेकी हुन्।
‘म दिनभर म’जदुरी गर्न जान्छु। छोरी एक्लै यताउति हिँड्छे। पोहर कुन चाहि पापीले छोरीमाथि ज’थाभाबी गरेछ। जसोतसो अस्पताल लगेर बच्चा फा’ल्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘दिशा, पि’साब र म’हिनावारीसमेत स्या’हार्न नसक्ने छोरीलाई मन दु’खाएर भए
पनि तीनमहिने सुई लाइदिने गरेकी छु।’ माओवादी द्वन्द्व’ताका २०६० सालमा सु’रक्षाकर्मीबाट घरछेउमै ब’ला’त्का’र’मा परेकी थिइन् सरला। त्यही पिरले र’क्सी पिउने भएका पति अर्को वर्ष २०६१ सालमा बि’तेपछि उनको जीवनमा अर्को पी’डा थपियो।
उपचार अ’भावमा आठ वर्षका छोरासमेत गु’माएकी सरला यतिबेला बस्ने ठाउँ न’भएपछि माइतीको शरणमा छिन। ‘दुई छोरी बिहे गरेर घर गइसके। छोरो सानैमा बि’तेको हो। आफ्नो भन्ने काही छैन। अहिले माइतीघरमा बसेकी छु।’ कहीँकतैबाट कुनै सहयोग
नपाएकी सरला द्व’न्द्वपी’डितको तथ्यांकमा पनि अ’टाएकी छैनन्। उमेर पुगेकी छोरीले ओछ्यानमै दि’सापिसाब गर्न थालेपछि सरलाले सु’त्नुअगाडि छोरीको खाटमा सिस्नो राखिदिने गरेको बताउँछिन्।
‘माइतीमा बस्छु। छोरीले सु’तेकै ठाउमा दिसा गरिदिँदा माइतीतिरका रि’साउँछन्। अहिले त उसको खा’टमा सि’स्नो राखिदिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘सि’स्नो राख्न थालेपछि ओछ्यान दि’सा गर्न ब’न्द गरेकी छ।’ को’रोनाका कारण भएको ब’न्दाबन्दीले मजदुरी खो’सेपछि सरलालाई घर चलाउन ह’म्मेहम्मे परेको छ।
चिसो चुलो त’ताउन कठिन भएपछि उनी ब’न्दाबन्दी छलेर छिमेकमा म’जदुरी गर्न थालेकी छन्। एउटी आमा जसले मन गाँ’ठो पारेर छोरीलाई तीन महिने सु’ई लगाउँछिन्। उनका बारेमा सो’चिदिने फु’र्सदसमेत कसैलाई छै। ठाउँठाउँमा आफ्नी छोरीजस्ता अ’पांगता भएकाहरू राख्ने ठाउँ छन् भन्ने सुनेकी सरलालाई
कसैले छोरी लगिदिएर राखिदिए अनि उपचार गरिदिए दैनिकी अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा गरेकी छन्। ‘यसले गरी वा मैले गरें थाहा छैन तर ठुलै पाप गरेका रहेछौं। त्यही पा’पको स’जाय भगवानले भोगाउँदैछन् होला।’ यतिबेला छोरी मरे पनि सुख पाउँछे होला
जस्तो लाग्न थालेको सरला बताउँछिन्। उमेर नपुगेकी छोरीलाई परिवार नि’योजनको अ’स्थायी साधन तीन महिने सु’ई लगाएर बचाउनुपर्ने अवस्थाले आम रूपमा महिला कति अ’सुरक्षित छन् भन्ने पुष्टिसमेत गरेको छ।
सामाजिक सु’रक्षा भत्ताको भरमा जेनतेन दै’निकी चलाइरहेका सरला र उनीजस्तै त्यही भत्ताका भरमा चु’लो बाल्ने अन्य सहिद परिवारको अवस्था आज पनि द’यनीय छ। मृ’तक, बे’पत्ता र घा’इते अ’पांगता भएकाको मात्र तथ्यांक राखेको राज्यसँग यौ’न हिं’सा’पी’डि’त’को आधिकारिक लगत छैन।
त्यो बेलाको राज्य पक्षजस्तै वि’द्रो’ही पक्ष पनि पटकपटक राज्य सत्ताको सिं’हासनमा राज गरे पनि आफ्ना कारण दु’खेकाको घा’उमा म’लम ’लगाउन बस्ती छि’रेको देखिँदैन। ‘खाना लागेको गाँस का’टेर परिवर्तनका लागि भनेर ब’न्दुक बो’केकाको पेट भरियो।
उनलाई खाना खु’वाएको ब’दलामा शरीर लु’टाउनुपर्‍यो। तर अहिले खाना खाने र लुट्ने दुबै पक्षले सबै भुले,’ स्थानीय एक द्व’न्द्व’पी’डित भन्छन्, ‘त्यो बेलाको यु’द्धले वास्तवमै रो’ल्पालीका लागि धो’का मात्र दिएको छ। साँच्चिकै धेरै द्व’न्द्व’पी’डि’तहरू आज पनि कहि कतै खो’जिएका छैनन्।’
माओवादी द्व’न्द्व’को उ’द्गम थ’लोका रूपमा चिनिएको रोल्पामा हिजो दिएका घा’उले आज पनि दु’खाइरहने गरेको छ। माओवादीले मा’ओवादसँगै आ’फूहरूलाई समेत भुलेको द्व’न्द्व’पी’डि’तको गुनासो रहने गरेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Last Updated on: July 12th, 2021 at 12:52 pm